Baarlamaanka Itoobiya oo amray in xiriirka loo jaro ismaamulka Tigreega.
Hoggaamiye katirsan Dowladda Iiraan oo lagu dilay Bariga dalka Suuriya.
Jihaadiyiinta oo weeraray saldhigyada ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin Koonfurta Soomaaliya.
Mareykanka oo sheegay in uu heshiisiin doono Qowsaaradiisa Mandiqadda Khaliijka.
Wednesday October 07, 2020 - 08:03:50 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ismariwaaga udhaxeeya dowladda Xabashida Itoobiya iyo ismaamul goboleeyada qowmiyadda Tikreega ayaa meeshi ugu xumeed gaaray.
Baarlamaanka dowladda Itoobiya ayaa shalay soo saaray go'aan cusub oo ah in mas'uuliyiinta Federaalka ay joojiyaan dhammaanba wixii xiriir ah ee ay la lahaayeen hoggaamiyaasha gobolka woqooyiga Tigreega.
Xildhibaannada oo kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ayaa go'aankooda u cuskaday in doorashadii baarlamaaniga iyo middii madaxtinimada uu diiday Abiy Axmed islamarkaana aysan waafaqsanayn sharciga udegsan dowladda Itoobiya.
Goor sii horraysay ismaamulka Tigreega ayaa sheegay in aysan wax wadahadal ah layeelan doonin Abiy Axmed oo ay eedaymo kulul ujeediyeen, mas'uuliyiinta maamulka Tigray ayaa warbaahinta ka sheegay hadallo ugogol xaarayay gooni ugoosad iyagoo isku arka dowlad Itoobiya inteeda kale ka madax banaan, Tigreegu waxay caddeeyeen in aysan aqoonsanayn xukuumadda Abiy Axmed madaxda ka yahay.
"Golaha baarlamaanka wuxuu go'aansaday in dawlada federaalka ay jarto xiriir kasta oo ay lalaheed golaha deegaanka Gobolka Tigreega iyo hay'adda fulinta ee ugu sarreysa gobolka," ayaa lagu yiri bayaan ay baahisay wakaaladda rasmiga ah ee ku hadasha Afka dowladda Itoobiya
Xildhibaannada baarlamaanka Itoobiya oo umuuqday in ay taageersanyihiin siyaasadda uu Abiy Axmed kula dhaqmayo ismaamulka Tigray ayaa soo jeediyay in aan sheedda laga fiirsan tasarufaadka hoggaamiyaasha xisbiga TPLF.
Dhinaca kale madaxweynaha maamulka Tigreega ayaa si cad u sheegay in uusan aqoonsanayn xukuumadda Addis Ababa taas oo ka dhigan in ismaamulkan uu iclaamiyay dagaalka kala dhaxeeya Abiy Axmed.
Bishii Septembar doorashooyin madaxtinimo iyo kuwa baarlamaani oo aysan raalli ka aheyn dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa ka dhacay gobolka Tigray tallaabadaas oo lagu sheegay in qowmiyaddan ay tijaabinaysay awoodeeda siyaasadeed.
Sawirro: Jabhadda Tigreega oo dhulka soo dhigtay diyaarad ay laheed dowladda Itoobiya.
Korneel katirsanaa Melleteriga Itoobiya iyo ciidamo uu watay oo goostay.
Melleteriga Itoobiya oo sheegay in ay qabsadeen Maqalla iyo maamulka Tigreega oo beeniyay.
Jabhadda Tigray oo duqeymo cusub ku qaadday dalka Ereteriya iyo wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya.
Dowladda Itoobiya oo dagaalkii ugu dambeeyay ku iclaamisay qowmiyadda Tigreega.
Dagaal Oromada iyo ciidanka Itoobiya ku dhaxmaray Mooyaale.
Dowladda Itoobiya oo 'Beesha Caalamka' uga digtay faragelin ay ku sameyso dagaalka Gobolka Tigray.
Sawaariikh lagu weeraray caasimadda Amxaarada iyo Hoggaamiyaha Tigray oo diiday in ay isku dhiibaan Itoobiya.
Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Itoobiya: Jabhadda Tigreega oo magaalooyin laga qabsaday.